MCSE လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ | မိုက်ကရိုဆော့ဖ Gurgaon | ယင်း
21 မာ 2018
တစ်ဦး MCSE လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်းကဘာလဲ?
တစ်ဦး MCSE လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်းအမှတ်စဥ်ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး၏ကောင်းကျိုးများ
သင်ကအနေအထားကိုအခွင့်အလမ်းများ Explore နိုင်သလား
တစ်ဦးက သာ. ကောင်း၏လစာ
အိုင်တီအထူးကုအဆိုပါအိုင်တီကမ္ဘာကအမြဲပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်နေတိုင်းတစ်ချိန်ကသူတို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်စွမ်းရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီ၏-အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူတို့၏အပန်းဖြေလမ်းလျှောက်အတွက်နောက်ကွယ်မှနေရစ်ပေမည်။ ဒီတသမတ်တည်းဖြစ်ပေါ်နေသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုမောင်းနှင်ကမ္ဘာကြီးနဲ့အညီတစ်ဦးပြည်နယ်၌သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်ကြောင်းတစ်ခုမှာထိုကဲ့သို့သောစွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည် MCSE အောင်လက်မှတ်သင်တန်း။ အဆိုပါလက်မှတ်အိုင်တီပညာရှင်များအတွက်တဦးတည်းအများဆုံးလိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်အဖြစ်သူ့ဟာသူတာရှည်-ထူထောင်ထားပါတယ်။
MCSE, Microsoft Certified System ကိုအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအိုင်တီမာစတာအစဉ်အဆက်တောင်းဆိုနိုင်သည်ကြောင်းအရှိဆုံးကအနိုင်ဂိုးလက်မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်, ဒီ Microsoft ကအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပကတိလိုအပ်ချက်စနစ်နှင့် server ကိုအင်ဂျင်နီယာများအဘို့အယန္တရားကားရှိပါသည်။ ဒါဟာဥပမာကွဲပြားခြားနားသော module တွေအတွက်သင့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်စမ်းသပ်ရန်ကြောင်း7စာမေးပွဲတစ်ခုကျယ်ပြန့်အစီအစဉ်, ချိန်းဆာဗာ, System ကိုစင်တာ (SCCM) ကို Windows, SQL Server, Sharepoint နှင့် Lync ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်စက်တဲ့လောကမှာရှိတဲ့အခြားသူတွေအပေါ်ထားတဲ့အစွန်းကောက်ဖို့လိုအပ်သူကိုအိုင်တီပညာရှင်များ၏ကျယ်ပြန့များအတွက် MCSE ပြုပြင်ရေး။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်ဦး MCSE အောင်လက်မှတ်များပျက်ပြယ်အတွက်၎င်း၏အကြောင်းပြချက်ဆုံးရှုံးရသော profile များကိုအချို့ကြင်နာလည်းမရှိ, သူတို့သည်အဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းကိုခံရနိုင်သည်
ဒေတာဘေ့စ Backup ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
SQL Server အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
ဤရွေ့ကားပညာရှင်များမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ် MCSE သင်တန်းရရှိမှုများက၎င်းတို့၏တန်ဖိုးနှင့်အမြတ်အစွန်းကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါ။
အားလုံးတည်ထောင်ပျံသန်းအရောင်များ၏စဉ်းစားရန်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နေသင်တန်းနှင့်ခြီးမှမျး tutelage မှတဆင့်ပေးခဲ့သည်မ။ တဦးတည်းလုပ်ပိုင်ဆိုင်မှုကောက်နေစဉ်အာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် အဆိုပါလက်မှတ်အတိတ်ရဖို့ရိုးရှင်းတဲ့တဦးတည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာအားလုံးခုနစ်လုံးကိုစာမေးပွဲဖြေကိုရှင်းလင်းဖို့ကျယ်ပြန့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အလေ့အကျင့်တောင်းဆိုပါသည်။ ဒီအဘို့, သင်ရုံကိုအကောင်းဆုံးတဦးတည်းအပေါ်မှီခိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်နည်းပညာ Solutions တစ် MCSE သင်တန်းရယူဖို့ဆုံးသောယုံကြည်စိတ်ချရသောချဉ်းကပ်မှုအကြားတစ်ဦး standout အဖြစ်ယင်း၏အမွေအထညျဆောကျခဲ့သည့်ထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်သင်တို့အဘို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတစ်အစွန်းရောက်အသစ်ကဝဠာကိုဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, MCSE လုပ်နေတာ၏အပြီးတွင်: server ကို 2012 R2 သင်တန်းနှင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးသင်တန်းများတွင်ဆာဗာအခြေခံအဆောက်အဦ, သင်သည်သင်၏အလုပ်နယ်ပယ်ကယျြဝနျးနိုင်ပြီးအတွင်းပိုင်းမဟုတ်ကြရသောစွမ်းရည်, စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေး, virtualization, စနစ်များကိုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဇာတ်ကောင်အုပ်ချုပ်ရေး၏နီးအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် သင့်ရဲ့နည်းလမ်းများကြိုတင်။ ထိုနညျးတူ, သင်တန်းသငျသညျ၎င်းငျး၏ထုံးစံကိုဖန်ဆင်း MCSE အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်နှင့်အတူ cloud computing, ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ် Sharepoint နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနယ်မြေများ၏လယ်ပြင်ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။
အိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းအတော်လေးတောင်းဆိုနေသည်။ အနီးအနားမှာ, ကတောင်းဆိုသောအရည်အချင်းများဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးဒါ့အပြင်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုတည်းသင်တန်းဘွဲ့ရနှင့်ဘွဲ့လွန်အဆင့်အထိသင်တန်းအဘယ်သူမျှမက၎င်း၏ကျယ်ပြန့်-နယ်ပယ်ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်။ တဦးတည်းနေတဲ့အထောက်အသင်တန်းနှင့် MCSE သင်တန်းသွားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကိုပွီးမွောကျအမြားဆုံးစံပြချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအာရုံစိုကျဖို့ကန့်သတ်နိုင်စွမ်းအတွက်ကို up-to-The-မိနစ်နည်းပညာများအားဖြင့်သင်တို့ကိုကျွမ်းစေပါလိမ့်မယ်။
ကျွံ, ကုန်ကျစရိတ်-ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနတ်ဆိုးအလုပ်အကြောင်းသင့်စိတ်မချရစေသည်သောအိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာရှိပါတယ်။ အိုင်တီလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုသူတို့မဆိုကြာကြာသက်ဆိုင်သောမဟုတ်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ပုံစံအရသိရသည်သက်သာစေကြသည်မဟုတ်သောအဖြစ်အပျက်အတွက်၎င်း၏ကစားသမားကိုပြောင်းလဲရန် misgiving ပေးမထားဘူး။ ဤအခြေအနေ၌, တဦးတည်းပွင့်လန်းမှတစ်ဦးအပိုဆောင်းအစွန်းရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ဦးက MCSE သင်တန်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကြောင့်ကောက်ဖို့သင့်ဝါးယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတစ်ဦးအပိုဆောင်းတတ်လွယ်ခြင်းသင့်ရဲ့လစာအတွက်သုည၏အရေအတွက်တိုးချဲ့လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုပါတယ်။ တစ်ဦးက MCSE ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခြောတနှစ်လျှင် $ 96,215 တစ်ခုအံ့ဖှယျတပြင်လုံးကိုရယူဖို့နိုင်ပါတယ်အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူတိုးချဲ့အပေါ်စောင့်ရှောက်မည်။
တစ်ဦး MCSE အောင်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ကိုမဆိုအိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစဉ်အဆက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ဟာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ MCSE သင်တန်းတစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအသိအမှတ်ပြုရရှိထားသူနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်အခြေအနေများတွင်အများဆုံးအစွန်းရောက်အရေးပါမှုရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
10 သည်ထိပ်တန်း 2018 တိမ်တိုက် Certificate